Shangu, Wyndham, Marriott & Hilton: Iyo American Kurota Zororo Curaçao Style
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Curacao Kuputsa Nhau » Shangu, Wyndham, Marriott & Hilton: Iyo American Kurota Zororo Curaçao Style
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Canada Breaking News • Caribbean • Kurwisa • Curacao Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Sandals, Wyndham, Marriott naHilton vanocherekedza iyo yakanakisa yeDutch Caribbean Island Curacao uye kujoina neAirlines kuumba timu inokunda yekunakidzwa kwevaAmerican neCanada Vashanyi.
Ndege dzinobatana muzororo rerudo nyaya kubvumira Vafambi veAmerica kuwana zororo kubva kuCOVID uye vova muDutch muCuracao
Mhando dzakadai seSandals, Wyndham naHilton vese vanodyara mureza muCuraçao.
Ndege kuenda kuCuraçao yadzoka mukuzara kuzere kune vafambi veNorth America.
Zvinodiwa zvekupinda kwaCuraçao uye maprotocol ekuchengetedza akashanduka kuti aenderane nekushanduka kwenzvimbo yekufamba.
Chitsuwa cheDutch Caribbean cheCuraçao munguva pfupi yadarika chakaona kuwedzera kweyekutsva uye kushandwazve mazita ehotera kutsigirwa nemhando yepamusoro yekugamuchira vaenzi, pamwe nekuwedzera nzira dzendege. Kubva pane yakagadziridzwa zvizere Marriott kusvika kumusoro upscale zvese-zvinosanganisira sarudzo seDoto neSandals, pamwe neazvichangobva kumakwa zvivakwa seTrademark neWyndham neCurio neHilton Unganidzo, Curaçao inodada nekupa kusiyanisa dzimba dzekugara dzinopa kuwanda kwevanhu veNorth America vafambi. .
Curaçao Booms neNew Hotels, Yakawedzerwa Ndege dzeUS neCanada Vafambi
Iri rave riri gore rakasimba rekuwedzera kwechitsuwa nemaki akaita saSandals, Wyndham naHilton vese vachidyara mureza muCuraçao.
Mukutanga kwa2021, Sandals Resorts International yakazivisa kuti ichachinja iyo yazvino Santa Barbara Beach & Gorofu Resort kuita Sandals® Royal Curaçao. Yakagadzirirwa kutanga mukupera kwa2021, shanduko ichatanga iine makamuri mazana matatu-emhando yepamusoro uye masuti akatambanudzwa pamwe neSpanish Water Bay neCaribbean Sea, nekuwedzera kuwedzera kwakarongwa mumakore anotevera. Zvirongwa zvepfungwa zvekushanya zvinosanganisira kuwedzera zvinhu zvakakosha zvechi siginicha zvemaSandals, kusanganisira madziva matsva, nzira dzakasiyana siyana dzekudyira, pekugara pakapfava, uye ichangovakwa Rwizi Suites. Vashanyi vanozowanawo yeiyo 350-hole Pete Dye mukwikwidzi wegorofu, mairi maviri epamhepo uye 18-mativi-tsoka mukati uye kunze chiitiko uye nzvimbo yemusangano - yakakura kwazvo pachitsuwa ichi painopera. Iyo Sandals® Royal Curaçao inoenderera ichitengesa Nyamavhuvhu 38,000, 4 uye yakagadzirirwa kuvhura zvizere muna Kubvumbi 2021, 14.
Muna Chivabvu 2021, Kunuku Aqua Resort yakava chikamu cheMusika Wekutengesa neWyndham portfolio, muunganidzwa wemhando nyoro-yakamisikidzwa-pamusoro uye pamusoro pehotera dzinochengetedza mweya wavo wakazvimiririra uye kuzvimiririra. Iyo nzvimbo yekutandarira parizvino iri kuvandudzwa kwekunze uye kwemukati, kusanganisira ese makamuri nedzimba, akagadzirirwa kupedzwa muna 2022.
Pakupedzisira, muna Chikumi 2021, Hilton akazivisa kusaina kweMangrove Beach Corendon Curaçao Resort senzvimbo nyowani yekubatana neCurio Kuunganidzwa neHilton portfolio. Yakagadzwa neCorendon Boka, iyo-inosanganisirwa nzvimbo yekutarisirwa inotarisirwa kushandurwa munaGunyana 2021 uye ichagadzirisa zvakare kuvepo kwaHilton pachitsuwa. Muchitsauko chayo chinotevera seCurio Kuunganidzwa chivakwa, Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort ichapa zviitiko zvakafambiswa zvevafambi vanofarira, uye ichipawo kune avo vari kutsvaga runyararo rwekubva kuCaribbean.